Soosaarayaasha & Alaabada Cunnooyinka - Shiinaha Warshadda Lactose
Lactose Monohydrate waa cadaan, dhadhan la'aan, budada crystalline.Waxay leedahay ciriiri fiican iyo khaldan sababtoo ah walxaha wanaagsan iyo dusha sare ee gaarka ah. Badeecadan oo u hoggaansameysa codsiyada USP / EP / BP / JP iyo heerka CP, oo si ballaaran loogu dabaqay granulation qoyan, waxay la kulmi kartaa baahiyo kala duwan oo ku xiran qaybinta cabbirka kaladuwan ee kala duwan (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh).
Waa caddaan, dhadhan la'aan, budada kareemka leh dareeraha wanaagsan. Qaybta qallafsan ee Laktose ee lagu soo saaro habka loo yaqaan 'crystallization' waxaa loo qaybin karaa qeexitaanno badan oo leh qaybinta cabbirka cidhiidhiga ah ka dib markii la jeexay (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). Laktose Sieved Lactose wuxuu ka kooban yahay hal madarad oo kalluumeysi ah wax yar oo alaab ah oo kala sooc ah ayaa loo isticmaali karaa ocassions kala duwan. Kala soocida qoyaanka ah ma aha nidaam loo baahan yahay buuxinta kaabsolka sababtoo ah qalad wanaagsan, hargabka ...
Laktose lagu buufiyo-qalajinta
Laktose-ku-buufinta-qalajintu waa caddaan, budo aan dhadhan lahayn oo leh dheecaanno aad u wanaagsan.Waxay leedahay dheecaanno aad u fiican, isku-dhafnaan isku mid ah iyo isku-buufis wanaagsan oo ay ugu wacan tahay walxaha wareega iyo qaybinta cabirka cidhiidhiga ah, waxay ku habboon tahay riixitaanka tooska ah gaar ahaan, xulashada ugu habboon ee buuxinta kaabsolka iyo buuxinta dhalada. Faa'iidooyinka Codsiga: Kala-baxa deg-degga ah ee lafa-qabka biyaha oo wanaagsan; Kiniiniga wanaagsan ee adag ee qalajinta lagu buufiyo; Waxaa si isku mid ah loogu qaybin karaa foomka qiyaasta hoose ee maaddada dawada; Th ...
Xarunta la-buuxiyo ee lagu buufiyo "Laktose-Starch Compound" oo ka kooban 85% Lactose Monohydrate iyo 15% istaarijka galleyda.Waxaa lagu horumariyaa isku soo ururin toos ah, waxayna isku dhaftaa dheecaan aad u fiican, isku-xoqid iyo kala-tag. Xarunta Lactose-Cellulose Waa nooc ka mid ah buufin lagu qalajiyo oo ka kooban 75% Alpha Lactose Monohydrate iyo 25% budada cellulose. Wax soosaarku wuxuu leeyahay dheecaan aad u fiican, waxaana si gaar ah loogu talagalay in si toos ah loo cadaadiyo. Tiknoolajiyada miiska ayaa noqda mid fudud oo dhaqaale ahaan sabab u ah. .